Olee otú mbupụ iPhone Ndi ana-akpo ka a VCF | vCards
Chọrọ mbupụ gị iPhone kọntaktị na vCards (.vcf) dị ka a ndabere? Ma ọ bụ nanị chọrọ mbupụ gị kọntaktị na ndepụta si iTunes ndabere, n'ihi na ị furu efu gị iPhone? Ihe ọ bụla ị chọrọ, a n'isiokwu a bụ ihe na-agwa gị otú ị mbupụ kọntaktị site na iPhone (iOS 9 akwado) na vCards ma ọ bụ VCF faịlụ.
Ebe ị nwere m abụọ kwe nkwa. Otu bụ Wondershare TunesGo (Windows), ihe iTunes enyi, nke na-ahapụ ị nyefee iPhone kọntaktị na .vcf faịlụ, n'enweghị nsogbu. Ndị ọzọ bụ Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone data mgbake), ma ọ bụ Wondershare Dr.Fone maka iOS (Mac iPhone data mgbake), a dị ike iOS data mgbake ngwá ọrụ, nke bụ 100% mma na ọkachamara.
Ngwọta 1: Export iPhone kọntaktị na .vcf faịlụ na TunesGo
Ngwọta 2: Export kọntaktị site na iPhone ka vCard na Windows / Mac na Dr.Fone maka iOS
N'ezie, Wondershare TunesGo bụ a pụrụ iche iTunes enyi. Ọ na-enye gị ike mbupụ niile ma ọ bụ kọntaktị ahọrọ echekwara na iPhone ebe nchekwa, Exchanges, Yahoo !, iCloud, wdg na otu .vcf faịlụ ma ọ bụ multiple vCard faịlụ na efu data ọnwụ. E wezụga, i nwere ike mbupụ iPhone kọntaktị na Outlook, Windows Live mail na Windows Address Book.
Download TunesGo na-agbalị ya.
Cheta na: Wondershare TunesGo bụ n'ụzọ zuru ezu dakọtara na iPhone 6s (Plus), iPhone 6 (Plus), iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4 na iPhone 3GS mgbe ha na-agba ọsọ iOS 9/8/7/6 / 5. Ego na ihe Ama banyere akwado Apple ngwaọrụ na usoro chọrọ.
Nzọụkwụ 1. Run a usoro na jikọọ na gị iPhone na PC
Nke mbụ niile, wụnye Wondershare TunesGo na kọmputa gị. Na-agba ọsọ ya. Jiri gị iPhone si eriri USB jikọọ gị iPhone na PC. Gị iPhone ga-ahụrụ na mgbe ahụ gosiri na isi window, dị ka screenshot n'okpuru.
Nzọụkwụ 2. Export iPhone kọntaktị na vCard
Dị ka ị na-ahụ, ọtụtụ data na-egosi na ekpe sidebar. Ịchọta "Ndi ana-akpo" taabụ na pịa ya. na ya, Atiya, ị pụrụ ịhụ na kọntaktị na gị iPhone ebe nchekwa, iCloud, Yahoo !, Exchanges, na ndị ọzọ akaụntụ. Họrọ kọntaktị na ị ga-amasị mbupụ. Pịa "Import / Export" iji bugote a adaala menu. Ọ bụrụ na ị chọrọ mbupụ kọntaktị niile, pịa "mbupụ niile Ndi ana-akpo" Ọ bụrụ na ị na-ekpebi mbupụ ụfọdụ n'ime ha, pịa "Export kọntaktị ahọrọ".
Mgbe ahụ, ị ​​ga-esi isii nhọrọ na nri esiri-ala ndepụta: "Iji a Single vCard File", "ka otutu vCard Files" "Iji Outlook Express", "Iji Windows Live Mail", "Iji Windows Akwụkwọ Adreèsị" na "ka Outlook 2003/2007/2010/2013 ". Họrọ "Iji a Single vCard faịlụ" ma ọ bụ "a Multiple vCard faịlụ" na-ahụ a zọpụta ụzọ na-echekwa exported vCard gị PC.
Cheta na: mbupụ kọntaktị echekwara na gị iCloud, Exchange, Yahoo! na ndị ọzọ na akaụntụ, unu kwesịrị abanye na akụkọ ndị a na gị iPhone firsts.
Nke ahụ bụ nzọụkwụ banyere otú mbupụ iPhone kọntaktị na vCard. Ngwa ngwa na mfe, ọ bụghị ya? Ugbu a, download Wondershare TunesGo ka ihe na-mere!
Ngwọta 2: Export kọntaktị site na iPhone ka vCard na Windows / Mac na Wondershare Dr.Fone maka iOS
Wondershare Dr.Fone Maka iOS (n'ihi na Windows ọrụ), ma ọ bụ Wondershare Dr.Fone maka iOS (Mac) na-enyere aka ịhụ na mbupụ gị kọntaktị site na iPhone gị PC ma ọ bụ Mac, na ọ bụ naanị na-agụ gị data, mgbe na-echeta ma ọ bụ modifies gị data. Ị na mgbe nanị nwe gị iPhone data. Ihe bụ ihe ọzọ, ọ na-enye gị ụzọ abụọ mbupụ iPhone kọntaktị dị ka vCard: mbupụ ya ozugbo gị iPhone, ma ọ bụ mbupụ ya si gị iTunes ndabere.
Nkebi nke 1: Export kọntaktị site na iPhone ka vCard / VCF File
Nkebi nke 2: Export iPhone kọntaktị na vCard / VCF si iTunes ndabere
Nkebi nke 1: wepụ kọntaktị site na iPhone ka CSV
Tupu eme ihe ọ bụla ọzọ, jikọọ gị iPhone na kọmputa, na-agba ọsọ usoro ihe omume. Mgbe ahụ ị ga-esi a isi interface n'okpuru maka iPhone iPhone 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5C / 5S / 5 / 4S.
N'ihi na iPhone 4 / 3GS, ị ga-ahụ na windo dị ka nke a. Pịa Download iji nweta a nkwụnye maka ngwaọrụ gị na-anọgide na.
Nzọụkwụ 2. iṅomi gị iPhone maka kọntaktị na ya
Ka iṅomi data na gị iPhone 4 / 3GS, ị ga na-abanye ekwentị scanning mode. Eme ya site na-eso ụzọ n'okpuru:
3. Hapụ Ike button na na-na na ịpị Home button ọzọ 15 sekọnd, ruo mgbe ị ga-esi n'ime usoro.
Ọ bụrụ na ị na-eji iPhone iPhone 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5C / 5S / 5 / 4S, ị nwere ike ozugbo iṅomi gị iPhone site na ịpị Malite iṅomi button na isi window. Mgbe ahụ usoro ihe omume ga-amalite iṅomi gị iPhone-akpaghị aka.
Nzọụkwụ 2. Export iPhone kọntaktị na vCard / VCF faịlụ
Mgbe ihe omume ahụ okokụre iṅomi, ọ ga-enye gị azụ a Doppler akụkọ. Na akụkọ, niile data na gị iPhone na-egosipụta na ige, dị ka photos, kọntaktị, ozi, ndetu, wdg Ịnwere ike ihuchalu ha ka ha nwere ego. Mbupụ iPhone kọntaktị na vCard, họrọ ha na pịa Naghachi. Ị nwere ike mfe mbupụ ha kọmputa gị dị ka a VCF faịlụ.
Nkebi nke 2: Export iPhone kọntaktị na VCF / vCard si iTunes ndabere
Nzọụkwụ 1. Họrọ iTunes ndabere ka wepụ
Mgbe ị na-ebe a, pịa naputa site na iTunes ndabere File n'elu nke isi window mgbe ị na-agba ọsọ usoro ihe omume. Mgbe ahụ ị ga-esi a window n'okpuru. Gị niile iTunes ndabere faịlụ na kọmputa gị e chọpụtara. Họrọ onye na maka gị iPhone na pịa Malite iṅomi na-amalite adịrị ya.
Doppler ga-eri gị sekọnd ole na ole. Mgbe ahụ, ndị niile data na gị iPhone (iOS 9 akwado) ga-amịpụtara na-egosipụta na edemede. Pịa Ndi ana-akpo ka ego kọntaktị gị na pịa Naghachi mbupụ ha dị ka a vCard / VCF faịlụ na kọmputa gị.
Olee otú ọcha gị iPhone 6 ihuenyo
Na-eme AirDrop Share Ihe niile n'etiti ọ bụla iDevices?
> Resource> iPhone> Olee mbupụ iPhone Ndi ana-akpo ka a VCF / vCards